China 705-60-2,1-Phenyl-2-nitropropene mpanamboatra sy mpamatsy | Dumi
Factory mora vidy 4-Piperid ...
1 - Phenyl - 2 - nitropropene anarana anglisy
CAS ： 705-60-2 Milanja Molekular 163.173
Density ： 1.1 ± 0.1 g / cm3 Teboka 263.0 ± 9.0 ° C amin'ny 760 mmHg
Ny teboka manalefaka ny formula molekiola C9H9NO2 dia 63-65 ° C
Tselatra MSDS N / A teboka 115.7 ± 11.5 ° C
Fepetra fitehirizana ： Tehirizo ao anaty kaontenera mahamay amin'ny toerana mangatsiaka sy maina. Mitehiriza amin'ny mari-pana amin'ny efitrano. Tsy tokony halefa amin'ireo mpandraharaha mihena amin'ny fitrandrahana oksidatera
Anaran'ny vokatra 1-Phenyl-2-Nitropropene
teboka (ing) 115.7ºC
Teo aloha: 1451-82-7, 2-Bromo-4'-methylpropiophenone
Manaraka: 61-54-1, tryptamine
1. Fisafidianana hentitra ny akora, ny vokatray no fahadiovana avo indrindra.
2. Ny vidiny mirary sy mifaninana. Omeo ny serivisy tsara indrindra sy matihanina.
3.Fandefasana haingana ireo santionany, santionany avy amin'ny tahiry. Fomba fandefasana azo itokisana.
4.Fanandramana feno kaontenera be dia be ao amin'ny seranan-tsambo sinoa.
5. Best after-service aorian'ny fandefasana.
6. Antontan-taratasy matihanina amin'ny fahazoan-dàlana ho anao.
F1: Hanome santionany amin'ny fitiliana ve ianao?
A: santionany maimaimpoana ho an'ny fanombanana kalitao ho an'ny ankamaroan'ny vokatra, fa ny mpanjifa kosa tsy mila manao afa-tsy ny saram-pandefasana amin'ny fandefasana ireo santionany amin'ny varavaranao.
F2: Inona ny MOQ anao?
A: Ho an'ny vokatra avo lenta, ny MOQ dia manomboka amin'ny 10g, 100g ary 1kg.
F3: Inona ireo karazana fandoavam-bola ekenao?
A: Western Union, kaonty orinasa, BTC, sns
F4: Ahoana ny amin'ny ora fandefasana anao?
A: Amin'ny ankapobeny dia maharitra 3 ka hatramin'ny 5 andro aorian'ny fahazoana ny vola aloanao mialoha.
F5: Ahoana no itondranao ny fitarainana kalitao?
A: Voalohany indrindra, ny fifehezana kalitao dia hampihena ny olan'ny kalitao hatramin'ny zero. Raha misy ny tena olana eo amin'ny kalitao, dia halefanay entana maimaim-poana hanoloana anao na hamerenanao ny very anao.
73-22-3, L-Tryptophan avo lenta ny vidiny mialoha ...
77472-41-0 tamin'ny2-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidineacetic ...
CAS 72-19-5, fahadiovana avo L-Threonine
Fahadiovana avo lenta 99% L-Methionine Powder CAS 63-68-3